News Collection: सम्झना किन देखिन्छिन् सेक्सी?
त्यसो त सम्झनाले नाच्दा ग्ल्यामर्सको नाममा भल्गारिटी देखिने आरोप पनि उनलाई नलागेको होइन। यो विषयमा उनले भनिन्, 'मैले नाच्दा मेरो नृत्यमा भल्गारिटी होस् भनेर नाच्दिन'। नृत्यको तालमा शरीरको लचकतामा त्यो देखिन्छ भने म के भनुँ ? तर म भल्गारिटीभन्दा पनि मेरो नृत्यमा बढी सेक्सी हाउभाउ देखिने कुरा मान्दछु। र, भल्गारिटी अनि सेक्सी फरक हुन्। त्यसैले म सेक्सी देखिन्छु होला तर भल्गारिटी देखिन्न,' उनले दाबी गरिन् ।